Sida loo xafido sawirada kujira Android si aad si nabad ah ugu dirto | Androidsis
Waxaan ku laabaneynaa tabobar casri ah oo fiidiyow ah oo Android ah, markan waxaa loogu talagalay dhammaan kuwa adeegsada ee doonaya inay helaan amniga ugu badan iyo hubaal ahaanshaha asturnaanta markay sawirradooda u dirayaan Android. Marka, maanta waxaan kuu sharaxayaa xalka weyn ee na caawin doona kaqarixi sawirada Android si aad si nabad ah ugu dirto Iyada oo loo marayo emaylka ama codsiyada farriinta u oggolaanaya, sida Telegram for Android.
Waxaan ku guuleysaneynaa tan si aad iyo aad u fudud oo leh soo dejinta iyo rakibidda codsi gebi ahaanba bilaash ah oo loogu talagalay Android oo aan awood u yeelan doonno inaan si toos ah uga soo degsanno Google Play Store, oo ah dukaanka rasmiga ah ee loogu talagalay Android. Marka hadda waad ogtahay, haddii aad rabto inaad ogaato sida sii Android amnigaaga dheeraadka ah iyo gaar ahaan at sawiro iyo fariimo aad ku dirto baraha bulshada ama emayl, Waxaan kugula talinayaa inaadan seegin faahfaahinta fiidiyowga gundhigga ah ee aan kaaga tagay bilowga maqaalkan, iyo sidoo kale inaad gujiso «Sii wad aqriso qoraalkan» inaad marin toos ah u hesho soo degsashada dalabka lagama maarmaanka u ah si loo gaaro.
Codsiga aan ka hadlayno, a qalab lagama maarmaan u ah amniga iyo asturnaanta sawirradaada, ama inaad u dirto ama aad ku kaydiso barnaamijkaaga sirta ah ee 'Android', ayaa ka jawaabaya magaca Farriinta Sirta ah ee Elite, oo aan kaaga tagayo xiriiriye toos ah oo loogu talagalay soo dejinta midig dhamaadka qoraalkan.
1 Laakiin maxay Fariinta Qarsoodiga ah ee Elite na siisaa?
2 Ka soo dejiso Fariinta Sirta ah ee Elite bilaash Google Play Store
Laakiin maxay Fariinta Qarsoodiga ah ee Elite na siisaa?
Farriinta Qarsoodiga ah ee Elite ee ka timid adeegsadaha isticmaalaha sida ugu fudud uguna macquulsan, waxay na siinaysaa suurtagalnimada sir ama masax sawirada iyo fariimaha qoraalka ah ilaa iyo inta sawiradan ama fariimahan ay ku kaydsan yihiin barnaamijka laftiisa.
Nooc ka mid ah sirta sirta ah ee loo adeegsan karo decryption-keeda waxaa kaliya oo lagu heli karaa iyadoo la adeegsanayo isla codsi oo kaliya cOgaanshaha furaha sirta in aan u adeegsanay sirta sawirada ama fariimaha.
Adeegsiga arjiga si aad uqariso ama uqeexdo sawirrada ama farriimaha qoraalka ayaa u fudud sida xulo lambar muhiim ah, lambar aan ku xulan doonno sida aan u jecel nahay oo leh tiro ama tirooyin inta aan rabno ah, taas oo, sida caqliga ku jirta iyo dabcan waa inaan ku ogaanno dejinta farriimahan ama sawirrada lagu duubay barnaamijka. Mar haddii furahan lambarrada ah la doorto, waxaan kaliya ku qasbanaan doonnaa inaan qorno farriinta si loo kaydiyo ama loo qaddariyo ama raadso sawirka si aad uqariso ama uqeexdo ka dibna dhagsii badhanka u dhigma. Si fudud oo fudud!
Sidoo kale, haddii aan sii wadayno inaan u dirno farriimo qoraal ah oo cod ah oo la socda arjiga, farriimaha qoraalka la xareeyay ama sawirro qarsoodi ah, qofka kale ama dadka aan u dirayno farriimahan ama sawirradan, sida ay macquul tahay oo loo maleynayo, haysashada codsiga lagasoo dajiyey lagana rakibay Android-kaaga, sidoo kale waa inaad hore u ogtahay furaha nambarada loo adeegsado isku mid ahaanta.
In kasta oo priori lagu sharraxay waxay kuu muuqataa xoogaa wareer ah, runta ayaa ah inay ka fududdahay sida ay umuuqato, waana sababta aan kaaga tagay barashada fiidiyowga ee ku saabsan isticmaalka arjiga, cashar fiidiyow ah ama hage ficil ah oo ku saabsan arjiga oo aan ku tusayo talaabo talaabo ah habka sirta iyo goynta fariimaha qoraalka iyo sawirada.
Ka soo dejiso Fariinta Sirta ah ee Elite bilaash Google Play Store
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo kaydiyo sawirada laga soo diro Android si nabad ah loogu diro (iyo sidoo kale fariimo)
Waa maxay waallida aan loo odhan sirta, oo aad ka doorbideysaa 'erayga' in la kaydiyo.
Ku jawaab Carlos Ruiz
Nomu S20, dib u eegis Isbaanish ah
4 barnaamijyada Google ee aadan tabi karin